Time for Myanmar Buddhists to kick out 969 Ma Ba Tha leader Thidagu and Wirathu | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တရုတ်ကောင်စစ် ၀န်ရုံးရှေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ တရုတ်ဘက်မှ ရပ်တည်နေသော ဂဠုန်နီဦးကာဝိယ
့ ရွှေမွတ်စလင် တက်မထောင်နဲ့။ ဆက်လှော်။ Where? Forwards or backwards or sideways? »
Time for Myanmar Buddhists to kick out 969 Ma Ba Tha leader Thidagu and Wirathu
ပုတ်ခတ်ခြင်းမဟုတ် လိုအပ်လွန်းခြင်းကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသောမေးခွန်းများ
မဘသ တွေရဲ့ လုပ်ရပ်က တစ တစ အတင့်ရဲလွန်းလာပြီး
ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကိုပဲ မြန်မာအစိုးရရဲ့အဖေရင်း တရုပ်ကိုလိုနီနိုင်ငံကို အကာအကွယ်ပေးလာခဲ့ပါပြီ။
မဘသ တွေဟာ သူတို့ အော်နေတဲ့ စကားတွေနဲ့လုပ်ရပ်တွေ က ဆန့်ကျင်ဘက် လုံးလုးံ ဖြစ်လာခဲ့တော့လူအများ အံ့သြဘနန်းဖြစ်နေရပါတယ်။
အရင်ကတည်းက မဘသ တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ လှုံ့ဆော်ချက်တွေဟာ လွန်စွာတရားမဲ့နေပြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုးံညီညွှတ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံသားအချင်းချင်းညီညွှတ်မျှတရေး တွေကိုပါ ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြတာပါ။ခုတော့ဗမာမ တွေ။တိုင်းရင်းသူတွေကိုပါ သိန်းသုးံဆယ် ပေးဝယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်းများစွာဂုတ်သွေးစုပ် အကုန်အလကားနီးပါးယူနေတဲ့ ကိုလိုနီတရုပ် ကိုပါ စစ်ခွေးနည်းတူအဖေ ထခေါ်နေပါပြီ။
ဒီ မဘသ တွေ ကိုမြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဗမာလူမျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာ တာဝန်အရှိဆုးံပါ။
ဒီကိစ္စ က မြန်မာပြည်ထဲက ဗုဒ္ဓဘသာဝင်များ တာဝန်ယူရှင်းလင်းဖယ်ထုတ်ပစ်ရမဲ့ အရှုပ်ထုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မြန်မာလူထုက သည်းသည်းလှုပ်လေးစားပြနေတဲ့ ခင်ညွှန့်ရဲ့ ပါတနာ ကြံ့ဖွတ်ဆရာတော်si’ta’gu ဟာ မဘသ ရဲ့ ဒုဥက္ကဌဖြစ်ပါတယ်။
တရုပ်ကို အဖေခေါ် နေတဲ့ မဘသ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။
အခု တရုပ်နဲ့ စစ်ခွေး ပေါင်းပြီး ရမ်းကားနေတာမှာ si’ta’gu ဘယ်လိုများ အမျိုး ဘာသာ ကို ချစ်ပြနေပါသလဲ။ မဆိုင်သလိုနေ နေပါတယ်။ မဘသ လုပ်သမျှလည်းလက်ပိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။အရင်ကတည်းက လည်း လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
si’ta’gu ဟာ အရင်ကတည်းက စစ်ခွေးလေသံပဲထွက်ခဲ့တာပါ။လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ ဥပဒေ မဟုတ်ဘူး။လိုက်နာစရာမလိုဘူး ” ဆိုတဲ့ မာရ်နတ်ရဲ့ကဗျာကိုရွတ်ဆို ခဲ့သူဖြစ် ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာဟာ အခြေခံကျတဲ့လူ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေ တခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။လူပီသ ချင်ရင် လိုက်နာရပါတယ်။ဥပဒေ ပြဌာန်းပေးမှလိုက်နာမယ် ဆိုတာ လူ့စည်းဝိုင်းအပြင်ဘက်က စကားသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်အရင်က ကျနော်အမုန်းခံပြီးရေးခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံထားခြင်းမရှိတဲ့ ဝါဒ တခု ဆိုပြီးတော့။နွား အခွင့်အရေးကျတော့တွင်တွင်အော်ပြနေပါတယ်။ ကိုယ့် အယူဝါဒရဲ့ သွေးပုပ် သွေးဆိုးတွေကိုမြန်မာလူထုက ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းရမှာသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
This entry was posted on December 28, 2014 at 6:29 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Time for Myanmar Buddhists to kick out 969 Ma Ba Tha leader Thidagu and Wirathu”
December 28, 2014 at 9:23 am | Reply
မဘသများ အနာရှိလျှင် ကုသထား… ဆေးထိသည့်အနာ မခံသာ… တွန့်ကာလူးရရှာ…
ဆေးကို အပြစ်ရှာ မဆိုနဲ့…
အစရှိသော ရဟန်းတော်များစုပေါင်း၍ “ဝိဘဇ္ဇပဲ့တင်သံ´´အမည်ရှိ စာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်ဖို့ရန်ရှိပါကြောင်း ကြေငြာမောင်းခတ်လိုက်ပါသည်။-